Sanwichi ọkụkọ ọkụkọ - Goodao Technology Co., Ltd.
A na -eme ọgwụgwọ ahụ site na ezigbo anụ ọkụkọ na azụ. Ọkụkọ na cod bụ ihe nri abụọ kacha elu nke bara ọgaranya na Omega 3 na 6 nke na -enye nri maka akpụkpọ anụ mara mma na mkpuchi maka nkịta. Ngwaahịa a dịkwa obere abụba mana ọ bara ụba na protein, vitamin na mineral na -emezi mgbaze nkịta gị. Anyị na -ekwe nkwa na enweghị ọka wit, ọka, ma ọ bụ soy, enweghị mgbakwunye, agba, ma ọ bụ ihe nchekwa.
Protein Crube: 18%min
Abụba Crube: 5.5% max
Mkpụrụ eriri: 1.5% max
Aha ngwaahịa Sanwichi mkpọ ọkụkọ
Ngwaahịa bụ isi ihe Rawhide, ọkụkọ
Ebumnuche anyị bụ isi bụ inye ndị na-azụ ahịa anyị mmekọrịta dị mkpa na obere azụmahịa, na-enye nlebara anya nkeonwe maka ha niile maka ụlọ nri dị ọnụ ala China Dog Food Delicious Food Pet Products Pet Food Hot Sale Food, Anyị chọrọ iji ohere a chọpụta ogologo oge- mmekorita azụmaahịa na ndị ahịa sitere n'akụkụ ụwa niile.
Nri ụlọ nri China Duck Flavour Dog na ọnụ ahịa nri fillet, ndị ọrụ nabatara ma kwenye ihe anyị nwere ike nwee ike izute mgbanwe akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya mgbe niile. Anyị na -anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi sitere na ụdị ndụ niile ịkpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmaahịa n'ọdịnihu na ihe ịga nke ọma!
Nke gara aga: Chicken kechie nduku nduku
Osote: Mpekere ọkụkọ na beef
Chicken & Cod atọ Sanwichi Cube